Waxaan Sadukey V1 Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Waxaan Sadukey V1 Forex Tusiyaha
Waxaan Sadukey V1 Forex Tusiyaha
Waxaan Sadukey V1 Forex Tusiyaha waa tilmaame isbedel. Tilmaamahan waa mid fudud in la isticmaalo iyo talinayaa in bilowga ah. Waxay ku salaysan tahay mugga iyo tirin gudban.
Waxaa aad u fiican, waayo nooc kasta oo ah ganacsade Forex; scalper, ganacsade muddo dheer ah ama ganacsade intraday. Heerka gelinayn iyo xidhitaanka Xirfado aad ku xirnaan doontaa wakhti in aad dooratay. Haddii aad isticmaasho wakhti dhagan, waa inaad la furitaanka iyo xidhitaanka amarada aad sida ugu dhaqsaha badan haddii aad go'aansato in aad isticmaasho waqtiga dheer.
Fahamka shaqada ee tilmaame I_sadukey_v1 ah.
tilmaame I_sadukey_v1 waxaa soo bandhigay shaxda ugu weyn ee ganacsiga. Waxaa la soo bandhigay sida line a socda qiimaha suuqa oo badala midabka ku xiran tahay isbeddel in la ogaado in la jirta waqti. line waxaa la aasaasay of sanduuqyada yar yar kuwaas oo dhererka kala duwan taas oo ku xidhan xoogga arrimuhu. Haddii xoog arrimuhu waa heer sare, dhererka sanduuqyada kordhin doonaa oo hoos marka xoogga isbeddel hoos. sanduuq kasta oo la xirrira line waxaa la aasaasay dhiganta laambadda kasta oo la sameeyay.
The sanduuqyada in ay u sameeyaan line waa mid buluug ah ama casaan ku xiran arrimuhu. Lid ku ah tilmaamayaasha kale oo cas ayaa muujinaya isbeddel hoos u ah iyo uptrend ah buluug, tilmaame adeegsanaya cas si ay u muujiyaan uptrend ah, iyo kuwo gaduud ah si ay u muujiyaan isbedel hoos.
lagugu tuday sawirka.1. tilmaanta i_sadukey_v1.
Qaybta cas xerad of line la soo bandhigay hoos laambadihii halka qaybta buluuga ah xerad waxaa la aasaasay kor laambadihii. Laakiin halkii tilmaamayaasha ugu in la siiyo ay signal marka qiimaha suuqa gudbo line tilmaanta, tilmaamahan qaadataa waqti qaar ka mid ah ka hor signal, kaasi oo caawinaya in fogayn ah calaamadaha beenta ah.
Marka aad jiidi tilmaanta ama geliso tilmaanta gal shaxda ganacsiga ah, tilmaame caadadii i_sadukey_v1 arbushin ilaa daaqadda ka muuqan doontaa. Haddii aad riixdid batoonka talooyin ah, Waad arki doontaa laba gashiga kuwaas oo ah countBars iyo nd. countbars ayaa lagu wadaa in 1000 by default, oo muujinaysa tirada bar hore u sameeyay / laambadood tilmaanta tirin doonaa shaxda hal mar ku raran / geliyo. Haddii aad hoos u qiimaha countbars, tilmaanta lagu soo bandhigi doonaa on tiro yar laambadood oo horey u sameeyay on shaxda markii ugu horeysay geliyo oo lid ku dhacaa marka qiimaha u korodho. nd ayaa dhanka kale waxaa loo isticmaalaa in la qeexo tirada sanduuqyada in la abuuri doono line ah. Qiimaha ugu yaraan in aad isticmaali kartaa qiimaha nd waa 2; halkaas oo baararka buluug ah ama casaan dheer lagu soo bandhigi doonaa hal dhibic halkii lagu dul fidiyey qaybta dheer ee khadka. Haddii qiimaha ah 1 waxaa loo isticmaalaa qiimaha nd ah, waxba lagu soo bandhigi doonaa.
Isticmaalka tilmaanta i_sadukey_v1 in meel iyo amar ku dhow.
Iibso amarada waxaa la geeyaa marka qaybta line jirsado in Red halka amar iibiyay waxaa la geeyaa marka qaybta line jirsado in ay buluug. Amarka waxaa meelo laambadda saddexaad ama labaad ee lagu sameeyay ka dib markii isbedel midab ah. ganacsiga No waa in la sameeyaa / kaalinta ka dib soo laambadda; ganacsade lagu sugo signal soo socda ama raadiyo signal ah ka labo-labo kale lacag ama wakhti kale.
Fig.2. Isticmaalka tilmaanta i_sadukey_v1 ganacsiga.
Trades xiran yihiin marka tilmaanta siinayaa signal ah oo iska soo horjeeda. jagooyinka iibiso The xiran yihiin marka isbedel color si cas iyo amarada lacagta xiran yihiin marka isbedel color si buluug.
Waxaan Sadukey V1 Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Waxaan Sadukey V1 Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo aan Sadukey V1 Forex Indicator.mq4?
Download waxaan Sadukey V1 Forex Indicator.mq4
Copy waxaan Sadukey V1 Forex Indicator.mq4 aad Metatrader Directory / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on aan Sadukey V1 Forex Indicator.mq4
Tusiyaha waxaan Sadukey V1 Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saarto waan Sadukey V1 Forex Indicator.mq4 4 Chart?
Waxaan Sadukey V1
article PreviousDirection Forex Tusiyaha
Next articleGanacsade Wawasan Forex Tusiyaha